केपी ओलीको नारा÷२०७४ साल एमालेमय नेपाल – YesKathmandu.com
शनिबार २६, चैत २०७३
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ७४ साल एमालेमय हुने बताएका छन । एमाले निकट जन सांस्कृतिक महासंघको २९ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उनले यो वर्ष भित्र तीनवटै चुनावमा नेपाल देश एमालेमय हुने बताएका हुन ।
बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश संघीय संसदको चुनाव हुन्छ । यी सबै निर्वाचनहरुको परिणाम के हुन्छ ? मैले एउटा शब्द भन्ने गरेको छु– २०७४ साल एमालेमय नेपाल । अहिले दर्शक हुने समय होइन, यो काम गर्ने समय हो । योगदान गर्ने समय हो, देशका लागि र देशलाई समृद्ध बनाउन एमालेमय बनाउने समय हो । त्यसकारण एमालेमय नेपाल बनाउन बाजा बजाउन जान्नेहरु बाजा लिएर उठ । हातमा कलम हुनेहरु कलम लिएर उठ । कुची चलाउन जान्नेहरु कुची लिएर उठ । केही नजान्नेहरु आवाज लिएर उठ ।
देशमा एमाले पार्टी रहेसम्म गद्धारी हुन नदिने समेत उनले बताए । यतिबेला तपाईंहरुले देखिरहनु भएको देशलाई तानेर फेरि असहज अवस्थामा लैजाने प्रयासहरु भएका छन् । त्यो कुनै हालतमा हुन सक्दैन, किनभने एमाले छ । एमाले छ भन्या के हो ? तपाईं हामी छौं । देशभक्त जनता छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि संघर्ष र वलिदान गर्ने जनता छ । ती जनता हुँदा हुँदै एमाले देशलाई पछाडि फर्काउने कुनै प्रयास सफल हुन दिंदैन ।
सोही कार्यक्रममा उनले वुद्धिजीविहरुको आलोचना समेत गर्न भ्याए । भने ‘ हाम्रा बुद्धिजीवी के भएका होलान्, नाम हेर्दा हिप्पोपोटामस जस्तो लाग्छ । न काम लाग्छ न बोकेर हिंड्न मिल्छ । ठूलो भएर पनि हात्तीले त बोकेर हिंड्छ नि । खाग काम लाग्छ, त्यो पनि छैन । काम चाहीँ केही पनि छैन । नामको, प्रसिद्धिको यत्रो ज्यान छ । क्षमताको ज्यान भारीभर्कम छ । तर, त्यो प्रसिद्धिको ज्यान अनुसार त्यसले उत्पादन गरिराख्या छैन कि । हाम्रा भीमकाय बुद्धिजीवीहरु, नामका भीमकाय भन्या हुँ है फेरि, साइजको कुरा गर्या होइन ।
उनले खराव मन हुनेहरु एमालेसँग हच्किएका, तर्सिएका आरोप लगाए । राम्रो उद्धेश्य हुनेहरु एमालेसँग हच्किंदैनन् । लोकतन्त्रलाई मन पराउनेहरु, देशलाई माया गर्नेहरु एमालेसँग हच्किंदैनन् । सामाजिक न्याय र समानतामा विश्वास राख्नेहरु हच्किंदैनन्, सामाजिक सद्भाव हुनु पर्छ भनेर ठान्नेहरु हच्किंदैनन् । राष्ट्रिय एकता हुनु पर्छ भन्नेहरु एमालेसँग हच्किंदैनन्, यस देशको गरिवी हटाउनु पर्छ भन्नेहरुरु हच्किंदैनन् । कानुनको शासन हुनु पर्छ भन्नेहरु एमालेसँग हच्किंदैनन् । त्यस विपरितका तत्वहरु एमालेसँग हच्किन्छन् ।
विषादी मिसिएको रोटी खाँदा एकै घरमा ६ सहित १० को मृत्यु
प्रदेश ३ मा कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा बानियाँ